ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားခြင်း
Posted by တောင်ပေါ်သား on Feb 23, 2013 in Creative Writing, Short Story | 11 comments
ကျနော့်အမေက ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်နဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်လုပ်ဖူးတယ် ။
ကျနော်ဟာ နေရာတကာမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်ကချည်း စဉ်းစားတာမဟုတ်ပေမယ့် ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားတာမျိုးကကော လို့ တွေးမိတယ် ။
တွေးမိတာကလည်း ကျနော့်သားရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ပါ ၊
ဖြစ်ပုံက ဒီလို သူ ကျနော့်ကို သေနတ်တစ်လက် ပူဆာနေတာကြာပြီ အဲဒီ ကလေးကစားတဲ့ သေနတ်ကလည်း ၈၀၀၀ တဲ့ ၊
ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ် နိူင်ငံကြီးက ထင်ပါရဲ့ ကလေးတွေ အမြင်မှာ အတော့်ကို လိုချင်စရာ ပုံစံမျိုးပေါ့ ကျနော်ကလည်း သူလိုချင်လှတာကို သိလို့ အေးပါ လခရရင် ဝယ်ပေးမှာပေါ့ကွာ လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ် ၊
ဖြစ်ချင်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လစာထုတ်ရက်မှာ တခြားအရေးပေါ်ကိစ္စအတွက် အိမ်အတွက် လဝက်စာ ဝယ်ရတာအတွက်တွေကြောင့် မန်းနီးကနည်းတော့ မဝယ်ပေးဖြစ်တော့ဘူးဆိုပါတော့
အဲဒီမှာ သကောင့်သားက ပြဿနာ ရှာတော့တာပဲ ဘယ်လိုမှ မဝယ်ပေးနိူင်သေးဘူးဆိုတော့ မဝယ်ပေးနိူင်သေးတာမဟုတ်ဘူး မဝယ်ပေးချင်တာ မဟုတ်လားတဲ့ စာရေးဆရာမျိုးရိုးပီသစွာ စကားကလည်း တတ်ပါ့ ၊
ဒါတောင် ၄တန်းနော် နောက်တော့ သားအဖ ၂ ယောက် ရန်ဖြစ်ကြရောဆိုပါတော့ ကျနော့်သားက ကျနော့်ကို ဘာပြောလည်း သိလား ကတိမတည်တဲ့ အဖေ့ကို တစ်သက်လုံးမယုံတော့ဘူးတဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်က ကျနော့်အတ္တကို ရှေ့တန်းတင် reason တွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့
နောက် အမေရောက်လာတော့ အမေက ကလေးဘက်က စကားထပ်များရပြန်ရောပေါ့ မသေချာပဲနဲ့ ကလေးကို ဘာလို့ ကတိပေးလဲ တဲ့ ကျနော်က အမေ တကယ်ဝယ်ပေးချင်တယ် ဒါပေမယ့် ဒီလို ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပါ ဆိုတော့ reason ဆိုတာ လူတိုင်းပြလို့ရပေမယ့် နင်ပေးမှ ရမယ့်ကိစ္စကို သူမျှော်နေမှာ နင် ကိုယ်ချင်းမစာကြည့်ဘူးလား နင့်တုန်းက ငါဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့ဖူးလဲ ဗိုလ်အုန်းသီးစက်ဘီး လိုချင်လှချင်ရဲ့ဆိုလို့ ကမန်းကတန်း ဆွဲကြိုးပေါင်ပြီး ဝယ်ပေးခဲ့တာ အခု နင့်သားက ချက်ချင်းဝယ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး ၁၀ ရက်လောက်ကတည်းက ကြိုမှာထားတာ နင်ဘာလို့ ကတိကို လွယ်လွယ် ပေးခဲ့လဲ တဲ့
သားရဲ့ လှံသွားနဲ့တူတဲ့ စကားတွေ မီးတောက်လို အကြည့်တွေ ငလျင်နဲ့တူတဲ့ အမူအရာတွေကြားမှာ တော်တော့ကို အခံရခက်ခဲ့ရပါတယ်
ငါ့သား ငါ့ကို မယုံတော့ဘူးတဲ့လား ယုံကြည်မှူ ဆိုတာ ဘာလဲ ခင်တာ မင်တာ မေတ္တာ ချစ်တာတွေကို အသာထား လူတိုင်းရဲ့ ကြားထဲမှာ ရှိဖို့ရာ မလွယ်တဲ့ အကြောင်းတရားပါ လူတစ်ယောက်ကို ခင်ရတာ လွယ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ယုံကြည်ဖို့ဆိုတာကတော့ ခက်တာ အမှန်ပါ လူယုံသတ်လို့ သေရတယ် ဆိုတဲ့စကားတောင် ရှိသေးတာပဲ အခု ကျနော့်သားက ကျနော့်ကို မယုံတော့ဘူးတဲ့ ကလေးစကားပဲလို့ မပြောနဲ့ဦး ကလေးဆိုတာ လူကြီးလို မဟုတ်ပဲ သူခံစားရသလို ပြောကြတာကိုး
သူ့အဖွား ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ သေနတ်ကလေးနဲ့ ဆော့နေတာ မြင်တိုင်း ကျနော့်ရင်ထဲမှာ လှိုင်းတွေက ထန်လို့ပေါ့ တစ်ပတ်မှ ၃ – ၄ ရက်ပဲ အိမ်မှာ သားလေးနဲ့ အိပ်ရတဲ့ ကျနော့်ခမျာ အခုနေ ပြန်သွားတော့လည်း သားက အိပ်ရာဆီမလာတော့ပါဘူး အဖွားရင်ခွင်ကြားမှာပါ ၊
အဖေ့ကိုများ သူစိမ်းထင်သွားပြီလား သားရေ
( လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်က ရေးခဲ့ဖူးသော ခံစားမှု ဖြစ်ပါသည် )
ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေဖို့ လွယ်သလောက်…
ယုံကြည်မှုကို ည်ေဆောက်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။
ပျက်ပြီးတဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုတာကတော့ ပိုလို့တောင် ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ :buu:
ကတိဆိုတာ ပေးပြီးရင် တည်ရပါတယ်။
မတည်နိုင်ဘူးထင်ရင် ကတိပေးတဲ့အချိန် မပြည့်မီ ကြိုတင်ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။
လိမ်တာလေးတစ်ခုကလွဲရင် အကုန်ကောင်းပါတယ် ဆိုတာမျိုးလိုပေါ့။
လိမ်တတ်ပြီဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာမှ မျက်နှာလွှဲ စိတ်ချလို့မရပါဘူး။
ဒါကြောင့် Do as say .Say as do .
( ယထာဝါရီ တထာကာရီ၊ယထာကာရီ တထာဝါရီ) ဆိုတာလေး ကို ကိုယ့်ဆောင်ပုဒ် အဖြစ်မွေးစားထားပါတယ်။
ကိုမျိုးသန့်နဲ့ သားကောင်းကောင်း ဘယ်လိုပြန် အဆင်ပြေ ယုံကြည်မှု ပြန်တည်ဆောက်သလဲဆိုတာလေး ဆက်ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
ကိုမျိုးကောင်း မျိုးသန့်ရဲ့သားလေးကလဲ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်လေးပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ကောင်းတယ်ဗျို့ ကတိမတည်တဲ့လူကို အဲ့ဒီလို ရှုတ်ချပစ်တာ………….
သားသမီးနဲ့ မိဘကြားမှာ ကတိတည်မှု ယုံကြည်မှုလေးတွေ အပြည့်အ၀ ရှိနေသင့်တာပေါ့……
မိဘကလည်း သားသမီးအပေါ်ကတိမတည်ဘူးဆိုရင် သားသမီးကလည်း အတုယူသွားလိမ့်မယ်…..
အိုက်လူကြီး မပြောချင်ဘူး ဘယ်သူမှ ယူမယ့်သူမရှိဘဲနဲ့ ချောကလက်ကြတော့ ၀ယ်ထားပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေတယ် ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့ဟာကို ၀ယ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး ယောက်ဂမဂျီးတော့နော် ဟွန်း
သားဆိုတာ ကြီးလာရင် မီး၊ သမီးကတော့ ကြီးလာရင် အား… ဒါကြောင့် သမီးလေးတွေကိုပဲ ခြစ်တယ်….။ အသက်ကြီးလျင် သမီးလေးရှာ……။
“ယုံကြည်မှု” ဆိုတာ …
ပျက်စီးသွားရင် ပြန်လည်ပြီး တည်ဆောက်ယူဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ် …
ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင်မှ ..
အရင် အခြေအနေထိ ရောက်နိုင်မယ် မထင် ….
အမှားကို ဝန်ခံပြီး ပြန်တည်ဆောက်ရင် ရနိုင်ကောင်းပါတယ် …
ရဟန်တွေ အာပတ် ဖြေသလိုပေါ့နော့ ….
ဒါ့ထက် ပြောရရင် …..
ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ပြန်ယူဖို့ ဆိုတာ
အတော်လေး ခက်မယ် ထင်ပါရဲ့ ….
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ရင်ထဲထိ ရောက်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ
ကြီးလာတဲ့ အထိ အမာရွက် အနေနဲ့ ကျန်ရစ်နေတတ်တဲ့ သဘောသဘာဝ ကြောင့်ပေါ့ …
ဖယောင်း အရွယ်မှာ လိုသလို ပုံသွင်းလို့ ရနိုင်တယ် ဆိုသလို ….
အဲ့ဒီ အရွယ်တုန်းက ထိခိုက် ထားတဲ့ ဒဏ်ရာဟာလည်း
သံတုံး သံခဲ ဖြစ်တဲ့ အထိ ထင်ကျန် နေဦးမှာပါပဲ …..
ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ပျက်ပြားသွားတဲ့ ယုံကြည်မှုကို
ခုလို ဖယောင်း အရွယ်မှာပဲ ပြန်လည် တည်ဆောက်ယူလို့ ရနိုင်ပါတယ် …
သံတုံး သံခဲ ဖြစ်မှဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲ သွားနိုင်တယ်လို့ …
ပွားချင်ဒါ ဝင်ပွားတွားဒဲ့ …
ယုံကြည်မှု ဆိုတာ လူအချင်းချင်း တိုင်းတာတဲ့ စံနှုန်းတစ်ခုလို့ မြင်မိပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ ယုံကြည်မှု ပျက်အောင်လုပ်ရင်
ရမယ့် အကျိုးဆက်က သိပ်နည်းမယ် မထင် :hee:
ပိုစ့် ပိုင်ရှင် ရေ . . .
သွေးရင်းသားရင်း . . တစ်ကမ္ဘာ လုံး မှာ မှ ဒီ သုံးယောက် ထဲရှိတာဗျာ ..။ ပိုစ့်ပိုင်ရှင် အမေရယ်၊ ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ရယ်၊ ပိုစ့်ပိုင်ရှင် သားသားရယ် . .. . . . . ဆိုတော့ ရင်းနှီးမှု နဲ့ ယုံကြည်မှု က သေနတ် တစ်လက် နဲ့ မလဲ နိုင် ပါဘူးဗျာ . . . . . ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ရဲ့ သားတော်မောင် လဲ . .အဲ့လို လဲ မယ့် ပုံမပေါ်ပါဘူး …. စိတ်မကြည်မသာ မဖြစ်ပါနဲ့ နော့ . . .ကျုပ် တစ်ခု မကြိုက်တာ ပြောမယ် (တစ်ယောက်ထည်း အမြင်ပါ..။) ကျုပ်သာ အဖွားနေရာမှာ ဆို . . ကလေးဘက် ကနေ လိုက်ပြီး ကလေးအကြိုက် မပြောဘူး ဗျာ . .။ ကိုယ်ကလဲ ၀ယ်ပေးနိုင်နေတယ် ဆို . . ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ၀ယ်ပေးလိုက် ပြီး နင့် အဖေကြီး ၀ယ်ပေးတာ လို့ ပြောလိုက်မယ် .. .. .. ..။ အဲ့လို လေး ကြားက ၀င်ထိန်းကျောင်း ပေးလိုက် ရင် ပြီးမယ့် ဟာ . . . . . . (ကြားဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ဗျာ . . . .။)
ကလေးတွေက တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကြားဖူးနားဝရှိတဲ့စကား တွေကို လိုက်ပြောတာပါ.. ဒါက ဘာကို ဆိုလိုသလဲ . . ဘယ်လိုခံစားသွားစေတတ်လဲ ဆိုတာတွေကို သူတို့နားမလည်ကြပါဘူး..
အဲဒါကြောင့် သားရဲ့စကားကို အဆုံးထိ မမှတ်စေချင်ပါဘူး . . ယုံကြည်မှုဆိုတာမျိုးကို သူနားမလည်သေးပါဘူး .. သူ့ဘဝမှာ သူ့အဖေသာလျှင် သူ့ဘဝဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ဗျာ .. အဲဒိအချိန် အဖေမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ရင်တောင် သားက တစ်ဦးတည်းသော နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့သူ ဖြစ်လာမှာပါ..
ဒါပေမယ့် ရေရှည် ယုံကြည်မူ့ ခိုင်မာအောင်ကတော့ တော်တော်လေးလုပ်ယူမှ ရမယ်ဗျာ